Gudaha,dibadda,cayaaraha,bulashada iyo waraysiyo » taageer hindisaha gobannimo si aan carruurtaada looga qaadan dhaxalkii ay awoowayeesheen nooga tageen oo ah dalka iyo dadka soomaaliyeed – Bio-Science Research Institute, Inc.
Gudaha,dibadda,cayaaraha,bulashada iyo waraysiyo » taageer hindisaha gobannimo si aan carruurtaada looga qaadan dhaxalkii ay awoowayeesheen nooga tageen oo ah dalka iyo dadka soomaaliyeed
London:-Anigoo magacyga la yiraahdo Aweys Cumar Maxamuud, ku dhashay Degmada A/Yabal sannadkii 1960kii, 20 kii sano ee lasoo dhafayna ku noolaa dalka Ingiriiska, waxaan u soo jeedinaayaa ummadda Soomaaliyeed hindise ama fikir cusub oo ugub ah oo lagu maareyn karo mushkiladda daba dheeraaty ee siyaasadeed iyo colaadaha qabaliga ah ee burburriyay dal iyo dad wixi Soomaaliyu lahayd.
Hindisahaan oon ku magacaabay Gobannimo wuxuu ku saleysan yahay sooyaalka taariikheed ee ummadda soomaaliyeed sida diinta, qowmiyadda soomaalinimada iyo dhaqanka ummadeed ee aannu leenahay. Waxa uu ku baaqi doonaa, una halgami doonaa, in qabaa’ilka Soomaaliyeed dhammantood u tanasulaan dalka iyo dadka, calanka iyo ciidda.
Sidaan kor ku soo sheegay, Gobannimo waa hindise cusub oon horay loogu soo bandhigin ummadda Soomaaliyeed iyo hoggaamiyaashooda toona, waxana uu ka kooban yahay 4 qodob oo muhiim ah:
Qodobka 1aad: In ummadda soomaaliyeed ay iscafiso. Wixi dhacay soo noqon maayaan ee waxa haray aan badbaadino. Sidoo kale hoggaamiyaasheenni iyo shaqsiyaadki annaga naga mid ahaa ee colaadaha iyo dagaallada ka qeybqaatay aan iska cafinno. Waxa dhacay ilaahay unbaa xisaabin kara ee annagu ma xisaabin karno. Midda kalana dadkoo dhan ayaa colaadda ka qeybqaatay (Xataa kaan qori qaadan, afka ama qalbiga ayuu ka taageeray), hoggaamiyaashu ma dagaallameen haddeysan dad u dagaala helin.
Qodobka 2aad: Qabaailku ha ka tansuleen 3da jago ee dalka ugu sarreysa si coladda qabiil iyo siyaasad-colaadeed-kicinta ummaddenna (politicization and polarization of Somali society) loogu beddelo qiiro waddaniyadeed, is-saamaxaad, iyo dareen ummadnimo.
Qodobka 3aad: 3da Jago ee waddanka ugu sarreysa (Madaxweynaha, Raiisul Wasaaraha iyo Guddoomiyaha Baarlamaanka) ha loo dhiibo dadkeenni aan colaadinay oon u gefeynay boqollaal sano si caddaalad iyo sinnaan ummadnimo oo ficil ah ay halkaas uga billaabato. Waa dadkeeni aan liididda iyo yasidda ku haynay 100 laal sano oo u bixinnay magacyada dulmiga iyo isir-reebka ku dhisan sida Boon, Midgaan, Tumaal, Yibro, Yaxro, iwm; iyo sidoo kale kuwii aan ku niri waxaad tihiin xabasho, addoon, iyo nasab dhiman aan gebdhohoodu guur lahayn.
Qodobka 4aad: Islaax ama isbeddel (tiradooda oo si weyn loo yareeyoo iyo tayadooda oo kor loo qaado) ha lagu sameeyo hayadaha sharci dejinta (Parliament) iyo fulinta (Executive).
Fadlan daawo 5 ta video ee fikirka gobannimo aan idinkugu soo gudbiyay (part 1, part 2, part 3, part 4, part 5) ood ka heli karto http://www.youtube.com/user/Gobannimo#p/u si aad u fahamto ujeeddada laga leeyahay fikirkaan iyo doorka shakhsiyeed ama qofeed iyo kan qoys ama kooxeed eed ka qaadan karto.
Aweys O. Mohamoud
Previous postK lite xvid divx
Next postSoma prescribtions » enter approved canadian rx main page – soma prescribtions